मेस्सी नेतृत्वको अर्जेन्टीनाको प्रदर्शन माथि अर्जेन्टिनी पूर्वस्टाईकर म्यारोडोनाले गरे यस्तो टिप्पणी ! || सुनौलो नेपाल
मेस्सी नेतृत्वको अर्जेन्टीनाको प्रदर्शन माथि अर्जेन्टिनी पूर्वस्टाईकर म्यारोडोनाले गरे यस्तो टिप्पणी !
अर्जेन्टिनी खेलाडीले आफ्नो नाम र क्षमता अनुसारको प्रदर्शन गर्न सकेनन् । हाम्रो प्रदर्शन अत्यन्तै निराशाजनक रह्यो । मैलै पूरै समय रंगशालामा बसेर खेल हेरेँ तर खुसी हुने एउटा क्षण पनि फेला पार्न सकिनँ । यस्तै प्रदर्शनले निरन्तरता पाउने हो भने जोर्गे साम्पाओली (प्रशिक्षक)ले अर्जेन्टिना फर्कनसक्ने अवस्था रहँदैन ।
खेल हेरिरहँदा मैले धेरैपटक मनमनै आफ्नो टोलीलाई गाली पनि गरेँ । आइसल्यान्ड विरुद्घको खेलका लागि हामीले कुनै तयारी नै गरेजस्तो देखिएन । म लियोनल मेसी वा अन्य खेलाडीमाथि आरोप लगाउन चाहन्नँ तर हामीले खेलभन्दा अघि गतिलो तयारी गरेको भने फिटिक्कै देखिएन ।
मेसीले पेनाल्टी खेर फाल्नु ठूलो कुरा होइन, खेलमा यस्तो भइरहन्छ । म आफैंले पनि स्पेनमा पाँचवटा पेनाल्टी खेर फालेको थिएँ, तैपनि म अझै डिएगो म्याराडोना नै छु त ।डिएगो म्याराडोना, अर्जेन्टिनाका पूर्वखेलाडी